သငျ့ကလေးဟာ ဉာဏျကွီးရှငျ တဈယောကျဖွဈနိုငျကွောငျး သိစမေယျ့ လက်ခဏာ (၁၀)ခကျြ
Home Child Care သငျ့ကလေးဟာ ဉာဏျကွီးရှငျ တဈယောကျဖွဈနိုငျကွောငျး သိစမေယျ့ လက်ခဏာ (၁၀)ခကျြ
ကလေးတှရေဲ့ရှမှေ့ာ ကွီးမားတဲ့ အနာဂတျတဈခုရှိကွောငျး ညှနျပွနတေဲ့ သှငျပွငျလက်ခဏာ အတျောမြားမြား ရှိပါတယျ။ သူတို့က ထငျရှားတဲ့ အနုပညာရှငျ၊ အောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးသမား ဖွဈနိုငျသလို၊ နိုငျငံရေးသမားကွီးလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အရညျအခငျြးကို သတိပွုမိဖို့နဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျအောငျ ကူညီပေးဖို့ လိုပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ အနာဂတျမှာ ဉာဏျကွီးရှငျတဈယောကျဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ?
၁။ သူတို့ဟာ အမွငျအာရုံနဲ့ ဆှဲလရှေိ့ပါတယျ
ဉာဏျရညျမွငျ့မားလှနျးတဲ့ ကလေးတဈယောကျဟာ သတငျးအခကျြအလကျ စုဆောငျးသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ သူတို့မွငျတဲ့ အရာရာတိုငျးကို မှတျဉာဏျမှာသိမျးဆညျးထားပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ နရောတဈခုကို အလညျသှားပွီးနောကျ ဓါတျပုံတှေ ကွညျ့စရာမလိုဘဲ အသေးစိတျကို ဆှဲနိုငျလြှငျ သူတို့ဟာ အရညျအခငျြးရှိသူတဈယောကျ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ဒီသဘာဝဖွဈစဉျကို ” ဓါတျပုံမှတျဉာဏျ” လို့ချေါကွပါတယျ။၂-၁၀%သော ကလေးတှသော ဒီစှမျးရညျ ပိုငျဆိုငျပါတယျ။ အရှယျရောကျသူမြားထဲမှာ ဒါကို နညျးနညျးပဲ တှရှေိ့ရပါတယျ။လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီနှငျ့ ဂယျလီလီယို ဂယျလီလေးရီ တို့မှာ ဒီ thinking strategy အမြိုးအစား ရှိခဲ့ပါတယျ။
၂။ သူတိုမှာ ကိုယျပိုငျအတှေးတှေ ရှိပါတယျ
စမတျကတြဲ့ကလေးဟာ angel လေးတှေ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ ကိုယျအာရုံမြားတဲ့သူတှဖွေဈပွီး မိဘတှပွေောရငျ နားမထောငျတတျကွပါဘူး။ သူတို့ဟာ ပုံပွငျပွောတာ စိတျအားထကျသနျသူတှလေညျးဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ ကှကျကှကျကှငျးကှငျး စိတျကူးစိတျသနျးမြားက အမြားအားဖွငျ့ မိဘတှေ၊ ဆရာတှကေို ရှော့ရစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထငျရှငျးမွငျသာတဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတှကေ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးရဲ့ လက်ခဏာတဈခုဖွဈပါတယျ။ဉာဏျရညျမွငျ့မားလှနျးတဲ့ ကလေးတှဟော ကြောငျးမှာ ပငျြးတတျကွပါတယျ။ မိဘတှကေ ဒီအပွုအမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့အတှကျ ‘ပညာရေးဟာ တကယျအရေးကွီးကွောငျး’ ရှငျးပွဖို့သာလိုပါတယျ။
၃။ သူတို့ဟာ စကားပွောမွနျလရှေိ့ပါတယျ
စကားပွောနှုနျးမွနျတဲ့ ကလေးတဈယောကျဟာ ဝေါဟာရ ကွှယျဝသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ဉာဏျကွီးရှငျဖွဈကွောငျး ဖျောပွနပေါတယျ။ သာမနျကလေးတဈယောကျဟာ အသကျ၂နှဈမှာ စပွီးစကားပွောပါတယျ။ ဉာဏျရညျမွငျ့မားလှနျးတဲ့ ၂နှဈအရှယျကလေးဟာ မြားသောအားဖွငျ့ ရှုပျထှေးတဲ့စကားအသုံးအနှုနျးတှေ တညျဆောကျနိုငျကွပါတယျ။ လူနဲ့မလိုကျအောငျ စကားလုံးကွီးကွီးတှေ ပွောတတျကွပါတယျ။ရှားပါးကိစ်စတှမှောတော့ ကလေးငယျဟာ နောကျကမြှ စကားပွောဖို့ သငျယူကွပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ဒီကလေးတှမှော အိုငျးစတိုငျး Syndrome ရှိတယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ အဲလျဘတျအိုငျးစတိုငျးဟာ သူ ရနှဈမရောကျခငျအထိကို လူတှအေမြားကွီးနဲ့ စကားမပွောခငျြခဲ့ပါဘူး။ ရူပဗဒေပညာရှငျ Richard Feynman၊ သင်ျခြာပညာရှငျ ဂြူလီယာရျောဘငျဆငျနှငျ့ အခွားသော ထငျရှားတဲ့သူအတျောမြားမြားဟာ စကားပွောနောကျကသြူတှေ ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။
၄။ သူတို့ဟာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့သူတှေ မဟုတျပါဘူး
ဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ကလေးဟာ အမြားအားဖွငျ့ အသိပညာရှငျနယျပယျတဈခုကို ရှေးခယျြကွပွီး ဘာသာရပျကို ကွိုကျနှဈသကျပါက နာရီပေါငျးမြားစှာ လလေ့လာနိုငျကွပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ အနာဂတျသခငြ်ျာပညာရှငျတဈယောကျဆိုရငျ ဘာသာစကားတှကေို သိပျပွီးဂရုစိုကျမှာမဟုတျပါဘူး။လကျရေးဆိုးခွငျးက ဉာဏျမွငျ့မားတဲ့ကလေးတှရေဲ့ အခွားသှငျပွငျလက်ခဏာ တဈခုဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောကျထဲက အတှေးတှကေို ဖမျးဖို့ကွိုးစားရငျး အမွနျရေးတာကွောငျ့ သူတို့လကျရေးက ဆိုးရတာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကြောငျးစညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို မလိုကျနာခငျြတာကွောငျ့လညျး ဖွဈပါတယျ။
၅။ သူတို့ဟာ sociable တှလေညျးဖွဈပါတယျ
စမတျကတြဲ့ ကလေးတှဟော ဖျောဖျောရှရှေမေရှိတဲ့ ကလေးတှဖွေဈတယျလို့ဆိုကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ “social intelligence” လို့ချေါတဲ့ အသုံးအနှုနျး တဈခုရှိပါတယျ။ genius တဈယောကျဖွဈဖို့ လူတဈယောကျဟာ သခငြ်ျာပုံသနေညျးအရှညျကွီးကို မှတျမိဖို့ မလိုပါဘူး။ Social geniuses တှဟော သူတို့နားကလူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးတညျဆောကျနိုငျစှမျး ရှိကွပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့သူငယျခငျြးတှကေို စိတျဝငျစားပွီး တရားမြှတသူဖွဈလြှငျ သူတို့ဟာ ဉာဏျရညျထကျမွတျသူတှေ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ကိုယျ့ရဲ့စိတျခံစားမှုနှငျ့ အခွားသူမြားရဲ့စိတျခံစားမှုကို အသိအမှတျပွုပွီး manage လုပျဖို့ တဈဦးခငျြးစီရဲ့စှမျးရညျ (emotional intelligence) ကိုလညျး မီးမောငျးထိုးပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီကလေးတှဟော မနျနဂြောတှေ၊ နိုငျငံရေးသမားတှနေဲ့ မားကတျတငျးကြှမျးကငျြသူမြားအဖွဈသို့ ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။
၆။ သူတို့ဟာ လူကွီးတှနေဲ့ အခြိနျအမြားကွီး ဖွုနျးကွပါတယျ
အနာဂတျဉာဏျကွီးရှငျတှဟော လူကွီးတှနေဲ့ စကားပွောရတာကို နှဈသကျပါတယျ။ သာမနျကလေးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ လူကွီးတှနေဲ့ အပေါငျးအသငျးလုပျရတာဟာ သီးသနျ့ဖွဈနသေလို ခံစားရပမေယျ့ ဉာဏျရညျထကျမွကျတဲ့ကလေးတှကေတော့ လူကွီးတှနေဲ့ ပေါငျးရတာကို နှဈသကျပါတယျ။ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ကလေးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ အသကျပိုကွီးတဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပေါငျးကွပါတယျ။ ဒီကလေးတှဟော သကျတူရှယျတူ ကလေးတှနေဲ့လညျး ပေါငျးသငျးဆကျဆံဖို့ လိုအပျပါတယျ။ စိတျပညာရှငျမြားက စမတျကတြဲ့ကလေးတှဟော အထီးကနျြမှုကိုခံစားရနိုငျတာကွောငျ့ မိဘတှကေို သတိပေးကွပါတယျ။
၇။ သူတို့က တကျကွှသူတှဖွေဈပါတယျ
အနာဂတျဉာဏျကွီးရှငျတှဟော တကယျတော့ တတျကွှသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့က တခွားကလေးတှထေကျ စောပွီး စကားပွောခွငျး၊ လမျးလြှောကျခွငျး စတငျပါတယျ။ စမတျကတြဲ့ကလေးတှကေ အားကစားတှကေို မုနျးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သူတို့ဟာ အားကစားလုပျရမှာထကျ အိမျမှာနပွေီး စာအုပျတှေ ဖတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါက အမှားတဈခုဖွဈပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက child prodigies တှဟော ဂနာမငွိမျသူတှဖွေဈပွီး သူတို့ဟာ တဈခုခု မလုပျရရငျ မနနေိုငျသူတှလေို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကမ်ဘာပျေါမှာ တီထှငျကွံဆမှု၊ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုတှေ ရရှိလာတာဖွဈပါတယျ။
၈။ သူတို့ရဲ့fine motor skill ဖှံ့ဖွိုးတဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေို ကွိုကျကွပါတယျ
သငျ့ကလေးဟာ ပုတီးလုံးတှကေို ကွိုးနဲ့သီရတာ၊ မမေနေဲ့အတူတူ ပဟဠေိဖှကျဖို့ ကွိုးစားရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအပျေါမှာ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ကလေးတဈယောကျအဖွဈ ပွုစုပြိုးထောငျပေးပါ။ လကျခြောငျးလေးတှရေဲ့ လုပျဆောငျနိုငျမှုနဲ့ ခွလေကျတှရေဲ့ သနျစှမျးမှု ဖွဈတဲ့ fine motor skill က ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးမွငျ့မားမှု တိုးတတျစဖေို့ အထောကျအကူဖွဈပါတယျ။ သေးငယျတဲ့ details တှကေို နှဈသကျတဲ့ ကလေးက စာရေး၊ စကားပွောကောငျးတယျဆိုတာ ဆရာတှေ အသအေခြာသိရပါမယျ။ သငျ့ကလေးဟာ အရာဝတ်တုသေးသေးလေးတှနေဲ့ ကစားနတေဲ့အခါ ကလေးကို စောငျ့ကွညျ့နသေငျ့ကွောငျး မမပေ့ါနဲ့ ။
၉။ သူတို့ဟာ ဟာသဉာဏျကောငျးပါတယျ
ဟာသဉာဏျက လူတဈယောကျရဲ့ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကို ဖျောပွပါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့ ဟာသလုပျနိုငျစှမျးနဲ့ တခွားဟာတှကေို နားလညျနိုငျစှမျးက စဉျးစားတှေးချေါနိုငျမှုနှငျ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ ဒီကလေးတှဟော သူငယျခငျြးတှေ အမြားကွီးရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ မသိမသာကှဲပွားတာတဈခုရှိပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာ လူတှဟော ကောငျးမှနျတဲ့ စိတျခံစားမှုနောကျကှယျမှာ စိတျဖိစီးမှု၊ နာကငျြမှုတှေ ဖုံးကှယျထားပါတယျ။
၁၀။ သူတို့မှာ မိဘကောငျးတှေ ရှိကွပါတယျ
သိပ်ပံပညာရှငျမြားရဲ့အဆိုအရ အနာဂတျဉာဏျကွီးရှငျတှရေဲ့ စံပွမိဘတှကေ ဒီလိုအရညျအခငျြးတှေ ရှိပါတယျ။မိဘတှဟော ခမျြးသာကွှယျဝတာထကျ ပညာတတျတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ဖခငျက တညျငွိမျပွီး စိုးမိုးခယျြလှယျမှုမရှိပါဘူး။ သားသမီးတှကေို လှတျလပျခှငျ့၊ တီထှငျဖနျတီးခှငျ့ အပွညျ့ပေးထားပါတယျ။မိခငျဟာ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ကလေးရဲ့ဉာဏျရညျဉာဏျသှေး အမှဆေကျခံမှုက မိခငျကနဖွေဈကွောငျး သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သင့်ကလေးဟာ ဉာဏ်ကြီးရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိစေမယ့် လက္ခဏာ (၁၀)ချက်
ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာ ကြီးမားတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုရှိကြောင်း ညွှန်ပြနေတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ အတော်များများ ရှိပါတယ်။ သူတို့က ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်၊ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမား ဖြစ်နိုင်သလို၊ နိုင်ငံရေးသမားကြီးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းကို သတိပြုမိဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်အောင် ကူညီပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ အနာဂတ်မှာ ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
၁။ သူတို့ဟာ အမြင်အာရုံနဲ့ ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်
ဉာဏ်ရည်မြင့်မားလွန်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မြင်တဲ့ အရာရာတိုင်းကို မှတ်ဉာဏ်မှာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ နေရာတစ်ခုကို အလည်သွားပြီးနောက် ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်စရာမလိုဘဲ အသေးစိတ်ကို ဆွဲနိုင်လျှင် သူတို့ဟာ အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်ကို ” ဓါတ်ပုံမှတ်ဉာဏ်” လို့ခေါ်ကြပါတယ်။၂-၁၀%သော ကလေးတွေသာ ဒီစွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူများထဲမှာ ဒါကို နည်းနည်းပဲ တွေ့ရှိရပါတယ်။လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီနှင့် ဂယ်လီလီယို ဂယ်လီလေးရီ တို့မှာ ဒီ thinking strategy အမျိုးအစား ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂။ သူတိုမှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေ ရှိပါတယ်
စမတ်ကျတဲ့ကလေးဟာ angel လေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်အာရုံများတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး မိဘတွေပြောရင် နားမထောင်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ ပုံပြင်ပြောတာ စိတ်အားထက်သန်သူတွေလည်းဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းများက အများအားဖြင့် မိဘတွေ၊ ဆရာတွေကို ရှော့ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်ရှင်းမြင်သာတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်မြင့်မားလွန်းတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှာ ပျင်းတတ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေက ဒီအပြုအမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ‘ပညာရေးဟာ တကယ်အရေးကြီးကြောင်း’ ရှင်းပြဖို့သာလိုပါတယ်။
၃။ သူတို့ဟာ စကားပြောမြန်လေ့ရှိပါတယ်
စကားပြောနှုန်းမြန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက်၂နှစ်မှာ စပြီးစကားပြောပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားလွန်းတဲ့ ၂နှစ်အရွယ်ကလေးဟာ များသောအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါတယ်။ လူနဲ့မလိုက်အောင် စကားလုံးကြီးကြီးတွေ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ရှားပါးကိစ္စတွေမှာတော့ ကလေးငယ်ဟာ နောက်ကျမှ စကားပြောဖို့ သင်ယူကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီကလေးတွေမှာ အိုင်းစတိုင်း Syndrome ရှိတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းဟာ သူ ရနှစ်မရောက်ခင်အထိကို လူတွေအများကြီးနဲ့ စကားမပြောချင်ခဲ့ပါဘူး။ ရူပဗေဒပညာရှင် Richard Feynman၊ သင်္ချာပညာရှင် ဂျူလီယာရော်ဘင်ဆင်နှင့် အခြားသော ထင်ရှားတဲ့သူအတော်များများဟာ စကားပြောနောက်ကျသူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄။ သူတို့ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး
ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ကလေးဟာ အများအားဖြင့် အသိပညာရှင်နယ်ပယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ကြပြီး ဘာသာရပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက နာရီပေါင်းများစွာ လေလ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ အနာဂတ်သင်္ချာပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင် ဘာသာစကားတွေကို သိပ်ပြီးဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရေးဆိုးခြင်းက ဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ အခြားသွင်ပြင်လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲက အတွေးတွေကို ဖမ်းဖို့ကြိုးစားရင်း အမြန်ရေးတာကြောင့် သူတို့လက်ရေးက ဆိုးရတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာချင်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သူတို့ဟာ sociable တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်
စမတ်ကျတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဖော်ဖော်ရွေရွေမရှိတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “social intelligence” လို့ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်း တစ်ခုရှိပါတယ်။ genius တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လူတစ်ယောက်ဟာ သင်္ချာပုံသေနည်းအရှည်ကြီးကို မှတ်မိဖို့ မလိုပါဘူး။ Social geniuses တွေဟာ သူတို့နားကလူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး တရားမျှတသူဖြစ်လျှင် သူတို့ဟာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်သူတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့် အခြားသူများရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး manage လုပ်ဖို့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည် (emotional intelligence) ကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေဟာ မန်နေဂျာတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ မားကတ်တင်းကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
၆။ သူတို့ဟာ လူကြီးတွေနဲ့ အချိန်အများကြီး ဖြုန်းကြပါတယ်
အနာဂတ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေဟာ လူကြီးတွေနဲ့ စကားပြောရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ သာမန်ကလေးတွေက များသောအားဖြင့် လူကြီးတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်ရတာဟာ သီးသန့်ဖြစ်နေသလို ခံစားရပေမယ့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေကတော့ လူကြီးတွေနဲ့ ပေါင်းရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် အသက်ပိုကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းကြပါတယ်။ ဒီကလေးတွေဟာ သက်တူရွယ်တူ ကလေးတွေနဲ့လည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်များက စမတ်ကျတဲ့ကလေးတွေဟာ အထီးကျန်မှုကိုခံစားရနိုင်တာကြောင့် မိဘတွေကို သတိပေးကြပါတယ်။
၇။ သူတို့က တက်ကြွသူတွေဖြစ်ပါတယ်
အနာဂတ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေဟာ တကယ်တော့ တတ်ကြွသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က တခြားကလေးတွေထက် စောပြီး စကားပြောခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း စတင်ပါတယ်။ စမတ်ကျတဲ့ကလေးတွေက အားကစားတွေကို မုန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ အားကစားလုပ်ရမှာထက် အိမ်မှာနေပြီး စာအုပ်တွေ ဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက child prodigies တွေဟာ ဂနာမငြိမ်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ တစ်ခုခု မလုပ်ရရင် မနေနိုင်သူတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ တီထွင်ကြံဆမှု၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေ ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ သူတို့ရဲ့fine motor skill ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်
သင့်ကလေးဟာ ပုတီးလုံးတွေကို ကြိုးနဲ့သီရတာ၊ မေမေနဲ့အတူတူ ပဟေဠိဖွက်ဖို့ ကြိုးစားရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအပေါ်မှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါ။ လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့ ခြေလက်တွေရဲ့ သန်စွမ်းမှု ဖြစ်တဲ့ fine motor skill က ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်မားမှု တိုးတတ်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ details တွေကို နှစ်သက်တဲ့ ကလေးက စာရေး၊ စကားပြောကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆရာတွေ အသေအချာသိရပါမယ်။ သင့်ကလေးဟာ အရာဝတ္တုသေးသေးလေးတွေနဲ့ ကစားနေတဲ့အခါ ကလေးကို စောင့်ကြည့်နေသင့်ကြောင်း မမေ့ပါနဲ့ ။
၉။ သူတို့ဟာ ဟာသဉာဏ်ကောင်းပါတယ်
ဟာသဉာဏ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ဖော်ပြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဟာသလုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ တခြားဟာတွေကို နားလည်နိုင်စွမ်းက စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒီကလေးတွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မသိမသာကွဲပြားတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုနောက်ကွယ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ နာကျင်မှုတွေ ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။
၁၀။ သူတို့မှာ မိဘကောင်းတွေ ရှိကြပါတယ်
သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့အဆိုအရ အနာဂတ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ စံပြမိဘတွေက ဒီလိုအရည်အချင်းတွေ ရှိပါတယ်။မိဘတွေဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတာထက် ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖခင်က တည်ငြိမ်ပြီး စိုးမိုးချယ်လှယ်မှုမရှိပါဘူး။ သားသမီးတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်၊ တီထွင်ဖန်တီးခွင့် အပြည့်ပေးထားပါတယ်။မိခင်ဟာ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အမွေဆက်ခံမှုက မိခင်ကနေဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous articleကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မိခငျနှငျ့ သန်ဓသေားအပျေါ ကဖိနျးဓါတျရဲ့ သကျရောကျမှုမြား
Next articleထိနျးမရ သိမျးမရတဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကလေးတှဟော ဘာ့ကွောငျ့ အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈရတာလဲ?